DLULA i-Airbus A380-800 VC Air France FSX & P3D - Rikoooo
Usayizi 44.7 MB
Play 300 094
Umbhali: Project Airbus, repack futhi 2D Panel by Rikoooo, VC ukulungiswa liphefumulelwe Facked
Kubuyekeziwe on 05 / 05 / 2013: Ukulungiswa VC izimbungulu futhi enezela panel 2D owadalwa Rikoooo.
Imibala ye-Airbus A380 Air France, ipakethe ephelele! Kufaka i-cockpit ebonakalayo esekelwe ku-A380 yangempela nemisindo yangokwezifiso, leli phakethe lilungisa nezimbungulu ngengilazi ye-opaque (i-Windhield) nomsakazo. Ikhabethe leklasi lokuqala (isitezi sesibili) nalo lilingiswa. Qaphela ukuthi ingilazi yesivunguvungu ingaba nge-opaque uma unemvula (kuphela FSX I-SP2 ne P3D). E-2012 Air France yayinezindiza eziyisishiyagalombili ezinjalo ezinezihlalo ze538 ngayinye ifakwe nezinjini "I-Alliance GP 7200."
I-Airbus A380 kuyinto civil kakhulu airliner widebody eside-hola ezine-injini kabili anesitezi ezivezwa Airbus, i osizayo Eads. Izakhi Its zakhelwe ikakhulu eFrance, eJalimane, eSpain, futhi United Kingdom, inhlangano wokugcina kwenziwa Toulouse, eFrance.
Uhlelo A380, ingqikithi ukuthuthukiswa izindleko 12 euro ayizigidi eziyizinkulungwane ezintathu, wethulwa maphakathi no-1990 njengoba Airbus A3XX. Uhambo lokuqala senzeka 27 April 2005 Toulouse sezindiza futhi inkonzo lokuqala commercial yilowo owaqhutshelwa October 25, 2007 by Singapore Airlines phakathi eSingapore Sydney.
I A380 liwukuthi 2012, indiza enkulu kunazo zonke civil enkonzweni nomgibeli, kanti eyesithathu izindiza ngobukhulu e emlandweni zezindiza, emva Hughes H-4 Hercules futhi Antonov An-225. emphemeni I A380 engenhla kwelula kanye nobude yonke we fuselage, enikeza endaweni gumbi 50% ngaphezu esincintisana yayo eqondile, Boeing 747-400. (Wikipedia)
Iphaneli entsha ye-2D eyenziwe i-Rikoooo + yalungiswa futhi yaguqulwa i-VC FSX futhi Prepar3D
Afakwe nge HUD in the VC futhi 2D Panel, ebusuku yokwenza, panel icons futhi amanye amasiko Izikali ...
I 2D panel olufakwe futhi yayihlanganisa kule pack. Nokho, ungalanda it ngokwehlukana: Thwebula 2D Panel (VC alungisa) - 8MB pa_a380_2dpanel_rik_fsx.zip